Nepal Finance Limited(Nepal Finance Limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
नेपाल फाइनान्सले ७०% हकप्रद जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल
काठमाण्डौ । नेपाल फाइनान्स लिमिटेडले ७० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ। कम्पनीले हाल कायम चुक्तापुँजी ४९ करोड ३४ लाख ९६ हजार ३२५ रुपैयाँको १ः०.७० अनुपातमा हकप्रद निष्कासनको तयारी गरेको हो। हकप्रद बिक्रीपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी ८३ करोड ८९ लाख ४३ हजार ७५२ रुपैयाँ पुग्नेछ। यसैबीच नेपाल फाइनान्सले हकप्रद...
नेपाल फाइनान्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, हकप्रद जारी मुख्य अजेन्डा
काठमाण्डौ । हकप्रद निष्कासनको मुख्य अजेन्डासहित नेपाल फाइनान्स लिमिटेडले आफ्नो २८ औँ वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो भदौ २६ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। सभा काठमाण्डौको कमलादीस्थित कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा वेबिनारमार्फत बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभामा हकप्रदको...
नेपाल फाइनान्स : एनपीएलमा उल्लेख्य सुधार, अन्य सूचक कस्ता ?
काठमाण्डौ । खराब कर्जा (एनपीएल) मा उल्लेख सुधार गरेको नेपाल फाइनान्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमाससम्म २ करोड ६२ लाख रुयैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीको नाफा अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा ४१.२१ प्रतिशतले कम हो। अघिल्लो...
सेयर बजारमा नेपाल फाइनान्सको आगामी यात्रा कस्तो रहला ? (प्राविधिक विश्लेषणसहित)
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । कुनै समयमा देशमा फाइनान्स कम्पनीको संख्या अत्याधिक थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको योजना लिएपछि फाइनान्सको संख्या हाल डेढ दर्जनका हाराहारीमा सीमित बनेको छ। धेरैजसो फाइनान्स क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा विलिन हुन पुगे। खासगरी तत्कालीन राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी...
काठमाण्डौ । नेपाल फाइनान्स लिमीटेडले ८ वटा आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभा एकैपटक आयोजना गरी पारित गरेको हकप्रदको विषय अहिले छायाँमा परेको छ । यो कम्पनीले २० औंदेखि २७ औं वार्षिक साधारणसभा गरी चुक्तापूँजी वृद्धिका लागि १ः१.७५ प्रतिशतको दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, सो प्रस्तावको विषय अहिले छायाँमा...
नेपाल र ललितपुर फाइनान्सको एकीकृत कारोबार असार २७ बाट हुने
काठमाण्डौ । नेपाल फाइनान्स र ललितपुर फाइनान्सको एकीकृत कारोबार यही असार २७ गतेबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाल फाइनान्सले ललितपुर फाइनान्सलाई प्राप्ति गरेपछि एकीकृत कारोबार सुरु गर्न लागेको हो। प्राप्तिपछि दुवै फाइनान्स गाभिएर बनेको संस्थाको नाम नेपाल फाइनान्स लिमिटेड नै रहनेछ। ललितपुर फाइनान्स १ः१ अनुपातमा नेपाल फाइनान्समा विलय...
प्राप्ति प्रक्रिया टुंग्याउन ललितपुर र नेपाल फाइनान्सले एकैदिन डाके विशेष साधारणसभा
काठमाडौ । प्राप्ति प्रक्रियालाई अनुमोदन गर्न नेपाल फाइनान्स र ललितपुर फाइनान्स लिमिटेडले एकैदिन विशेष साधारणसभा आह्वान गरेका छन्। दुवै कम्पनीका सञ्चालक समितिको हिजो जेठ १२ बसेको बैठकले विशेष साधारणसभा आगामी जेठ २८ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल फाइनान्सको सभा काठमाण्डौको कमलादीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा र ललितपुर...
खराब कर्जा घटे पनि नेपाल फाइनान्स घाटामा, वितरणयोग्य मुनाफाबाट पनि ऋणात्मक
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म नेपाल फाइनान्स लिमिटेडले घाटा व्यहोरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ३९ लाख ५ हजार रुपैयाँ खुद घाटा व्यहोरेको हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म भने कम्पनीले २ करोड २७ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। कम्पनीको वितरणयोग्य मुनाफाबाट पनि ३९ लाख ५ हजार रुपैयाँले...
काठमाण्डौ । नेपाल फाइनान्स लिमिटेडले ललितपुर फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने भएको छ। संस्थाको पुस २२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लतिलपुरको लगनखेलस्थित ललितपुर फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार हिजो पुस २३ गते दुवै संस्थाबीच प्राप्तिसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। दुवै संस्थाका सञ्चालक समितिका...
नेपाल फाइनान्सले राख्यो ५ लाख बढी कित्ता सेयर आजबाट लिलामीमा
काठमाण्डौ । नेपाल फाइनान्स लिमिटेडले अवितरित ५ लाख बढी हकप्रद सेयर आज शुक्रबारबाट लिलामीमा राखेको छ। कम्पनीले ५ लाख १५ हजार २४८.२५ कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको हो। लिलामीमा राखिएको कुल कित्तामध्ये संस्थापक सेयर २ लाख ५५ हजार ७८.७५ कित्ता र सर्वसाधारण सेयर २ लाख ६० हजार १६९.५० कित्ता छन्। लिलामीमा राखिएको सेयरको न्यूनतम मूल्य १००...
उतारचढावबीच यो साता सुन थोरै महँगियो
काठमाण्डौ । निकै उतारचढावबीच साताको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनको भाउ उकालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेको हो। योसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। हिजो बिहीबार भने सुनको भाउ तोलामा १०० रुपैयाँ घटेको थियो। यो दिन प्रतितोला...
पुस १७ बाट नेपाल फाइनान्सको ५ लाख बढी कित्ता लिलामीमा राखिने
काठमाण्डौ । नेपाल फाइनान्स लिमिटेडले अवितरित ५ लाख बढी हकप्रद सेयर लिलामीमार्फत बिक्री गर्ने भएको छ। कम्पनीले यही पुस १७ गतेबाट ५ लाख १५ हजार २४८.२५ कित्ता सेयर लिलामीमा राख्ने भएको हो। लिलामीमा राख्न लागिएको कुल कित्तामध्ये संस्थापक सेयर २ लाख ५५ हजार ७८.७५ कित्ता र सर्वसाधारण सेयर २ लाख ६० हजार १६९.५० कित्ता रहेको छ। लिलामीमा राखिने...
नेपाल फाइनान्सको हकप्रदमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । नेपाल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले १ः१.२५ अनुपातमा निष्कासन गरेको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन आज बुधबार अन्तिम दिन रहेको छ। गत मंसिर ४ गतेबाट कम्पनीले चुक्ता पुँजी १३ करोड ५८ लाख ५०० रुपैयाँको १२५ प्रतिशतबराबरको हकप्रद निष्कासन गरेको हो। कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका १६ करोड ९७ लाख ५० हजार ६२५ रुपैयाँबराबरको १६ लाख ९७ हजार...
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरुले द फर्न रेसिडेन्सीमा विशेष छुट प्राप्त गर्ने
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र द फर्न रेसिडेन्सी होटल, भरतपुर, चितवन बीच बैंकका ग्राहकहरुलाई विभिन्न सेवा शुल्कमा विशेष छुट दिने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौता पश्चात सिटिजन्स बैंकका डेबिट,क्रेडिट र प्रिभिलेज कार्डवाहकहरुले द फर्न रेसिडेन्सी होटलमा सेवा लिंदा विशेष छुट पाउँनेछन् । यस...
नेपाल फाइनान्सको घाटा ३४२.२९%ले बढ्यो, ईपीएस पनि ऋणात्मक
काठमाण्डौ । विश्व महामारी कोरोनाभाइरसको प्रभावका कारण नेपालको पहिलो फाइनान्स कम्पनी नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। कम्पनीको बिहीबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा खुद घाटा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३४२.२९ प्रतिशतले बढेर ६३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा...